Mogadishu Journal » Barcelona ayaa beenisay heshiiska Messi
Barcelona ayaa "gabi ahaanba beenisay wax masuuliyadeed" faahfaahinta heshiiska Lionel Messi ee ku dhacay gacanta El Mundo.
Faahfaahinta qandaraaska Lionel Messi ee noqoshada aqoonta guud ma aysan aheyn qaladka Barcelona, ​​kooxda LaLiga ayaa sheegatay.
Warbixin ay daabacday El Mundo ayaa lagu sheegay in heshiiska uu Messi ku saxiixay Camp Nou sanadkii 2017, kaasoo dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan, uu ku kacayo in ka badan € 555million muddada afarta sano ah.
Taasi waxay la macno tahay in lixda jeer ee ku guuleystaha Ballon d'Or uu heysto qandaraaska ugu qaalisan taariikhda isboortiga - waana wax ka dhan ah dhibaatada dhaqaale ee Barcelona ka sii dareysa.
Xisaabaadka xilli ciyaareedka 2019-20 waxay muujisay in deynta guud ee kooxda ay gaartay 20 820m maadaama cudurka coronavirus uu bilaabay inuu saameyn weyn ku yeesho dhaqaalahooda.
Doorashada madaxtinimada ee qalalaasaha leh ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bisha Maarso, iyadoo xiriirka xumaaday ee u dhexeeya Messi iyo guddigii hore, oo uu madax u yahay madaxweynihii hore Josep Maria Bartomeu, isagoo qeyb ka qaatay halyeeyga weerarka ka ciyaara isagoo si xamaasad leh isku dayaya inuu ka tago Barcelona bishii Ogosto ee la soo dhaafay .
Xaaladdaas darteed, Barca ayaa si dhaqso leh ugu dhaqaaqday Axaddii si ay u xaqiijiso kabtankooda waxayna ballan ku qaadeen inay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan El Mundo.
“Marka la fiiriyo macluumaadka maanta lagu daabacay wargeyska El Mundo, ee la xiriira qandaraaska xirfadeed ee ay kala saxiixdeen FC Barcelona iyo ciyaaryahanka Lionel Messi, kooxda waxa ay ka qoomameyneysaa daabacaaddeeda iyada oo la tixgelinayo inay tahay dukumiinti gaar ah oo ay xukuntay mabda’a qarsoodiga ah. xisbiyada, "ayaa lagu yiri bayaan la akhriyay.
"FC Barcelona waxay si cad u beenineysaa inay mas'uul ka tahay daabicitaanka dukumiintigan, waxayna talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doontaa wargeyska El Mundo, wixii waxyeelo ah ee ka dhalan kara daabacaadan.
“FC Barcelona waxay cadeyneysaa inay si buuxda u taageersan tahay Lionel Messi, gaar ahaan marka la fiiriyo isku day kasta oo lagu doonayo in sumcadiisa lagu xumeeyo, iyo in la dhaawaco xiriirka uu la leeyahay hay’adii uu ka soo shaqeeyay si uu u noqdo ciyaaryahanka ugu fiican adduunka iyo taariikhda kubada cagta.”
Barcelona ayaa ku soo laaban doonta garoonkeeda Axada garoonkeeda kooxda Athletic Bilbao ee LaLiga, halkaasoo ay 10 dhibcood ka hooseeyaan kooxda hogaanka heysa ee Atletico Madrid inkastoo afar guul oo isku xigta ay gaareen.
Messi, oo kaarka cas loo taagay markii ugu horeysay waayihiisa ciyaareed ee Barca ciyaartii ay la ciyaareen Athletic horaantii bishaan, wuxuu ka qeyb qaatay 15 gool iyo afar caawin tartamada oo dhan 2020-21.